काठमाडौँ, ३० असोज: भवन भट्ट जापान निवासी गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हुन् । पुर्ख्याैली घर गोरखा भएका भट्टले एनआरएन संघको आगामी दुई वर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्षमा उमेदवारी दिएका छन् । सोमबार संघको चुनाव हुँदैछ । उनले नेपालमा सञ्चार, पर्यटन, होटल, शिक्षालगायत क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । पछिल्लो समय पूर्वाधार विकासमा पनि लगानी थपिरहेका छन् । अध्यक्षमा उनको उमेदवारी किन ? र, एनआरएनको आगामी योजना तथा लगानीबारे भट्टसँग गरेको कुराकानीको संक्षेपः
पछिल्लो समय लगानीका लागि कुन क्षेत्र प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ?
सुरुङमार्ग त तुहिएजस्तै भयो नि ?
होइन । यसमा धेरै काम भएको छ । नेदेखिएको मात्र हो । ५५ अर्ब रुपैयाँ लागतको आयोजना हो । विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले सामान्य प्रतिबद्धता जनाइदिनुपर्छ । जलविद्युत आयोजना निर्माणको प्रतिबद्धता विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) हो । यस्तै केही विषय वा न्यूनतम सवारी नगुढे सरकारले जिम्मा लिइदिनुपर्छ भनेका छौं । छिट्टै सहमति हुने विश्वास छ ।
एनआरएनको नेतृत्वमा आउने तयारी गरिरहँदा लगानी विस्तारका कस्ता योजना तयार गर्नुभएको छ ?
एनआरएनलाई मैले ‘भर्सन टू’ अर्थात ‘नयाँ युगको एनआरएन’ भनेको छु । हामीभन्दा पछिल्लो पुस्ता आउँदैछ । ती युवालाई सक्रिया तथा सशक्त बनाउने, नेतृत्व क्षमता विकास गर्नेलगायत काम गर्न जरुरी छ । लगानीको हकमा ‘साझा लगानी संयन्त्र’ बनाउनुपर्छ । यसको तयारी पनि भएको छ । यसले एक हजारदेखि लाखौं रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्छ । थोरै लगानी गर्न चाहनेले पनि अवसर पाउँछन् । जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न एकमुष्ट रकम जम्मा हुन सक्छ ।
‘स्मार्ट (स्पेसिफिक, मेजरेबल, एचिभेबल, रिजनलेबल र टाइमलाइन) एनआरएन’ को अभियान पनि सुरु गरेको छु । यसको अर्थ सबैको पहुँचमा पुग्ने एनआरएन बनाऊँ र देशमा सुरु गरिएका काम समयमै पूरा गरौं भन्ने नै हो । सरकारी निकायसँग एउटा समझदारी गरेर काम गर्न पनि यो संयन्त्रले सहजिकरण गर्नेछ ।
संसारमा छरिएको वा पलायन हुँदै गएको हाम्रौ बौद्धिक स्रोत एकत्रित गर्ने गरी ‘एनआरएन एकेडेमी’ बनाउने पनि मेरो योजना छ । हार्वर्डका प्राध्यापक तथा नासाका वैज्ञानिकलाई देशमा ल्याएर नीति निर्माणमा उनीहरूले सुझाव संकलन गर्ने वातावरण तयार गर्न सके । देशलाई फाइदै हुन्छ । यीसँगै एनआरएनले सुरुदेखि हालसम्म पूरा हुन नसकेका काम तथा योजना पूरा गर्दै लैजाने हो ।
‘साझा लगानीको संयन्त्र यसअघिका चुनावमा पनि उठाइएको हो । तर, अहिलेसम्म बन्न नसक्नुको कारण के हो ?
अनुभवको कमीले संयन्त्र तयार हुन नसकेको हो । मसँग योजनासहितको संयन्त्रको खाका तयारै छ । जस्तै, पर्यटन प्रवद्र्धनमा मैले ‘अतिथि देवो भवः’ को अभियान सुरु गरेँ । यो एउटा संयन्त्र हो । यसो हुँदा हरेक विषय मन्त्रिपरिषद लगेर स्वीकृत गराइरहनु परेन । भर्खर अन्तर्राष्ट्रय विमानस्थल सफा गरियो । एक सातामा हामीले अख्तियारी पाएर एक महिनामा काम सक्यौं ।
नेपालमा काम गर्न प्रक्रिया लामो हुन्छ । यो प्रक्रिया तत्काल हटाउन सकिँदैन । राज्यका नियम कानुन पनि पालना गर्नुपर्छ । यसैले प्रारम्भिक चरणमै रहेर काम गर्न सक्ने संयन्त्र तयार गरे हाम्रा योजना अघि बढ्छन् ।
एनआरएनले गफ बढी गर्छन् वा सपना देखाउँछन् । काम गर्दैनन् भन्ने वर्षौंदेखिको आरोप छ । लक्षित काम गर्न एनआरएनलाई कुन पक्षले रोकेको छ ?
सपना त ठूलै बनाउनुपर्छ नि ! पूरा गर्ने प्रयास भएको हो । केही भएका छन् । केही नभएका पनि होलान् । एनआरएनले मात्र होइन स्वदेशी व्यवसायीले पनि लक्षित योजना समयमा पूरा गरेका छैनन् ? भारत, चीन, अमेरिका वा संसारमा सबैले भन्ने यही हो । विपी कोइराला र मदन भण्डारीले पनि सपना त ठूलै देखाएका हुन् । तिनले भनेका वा उठाएका कुरा आज पनि हुँदैछन् ।
विश्वमा माओत्सेतुङ, लेनिन वा अब्राहाम लिंकनले उठाएका मुद्दा आज पनि कार्यान्वयनमै छन् । यसैले सामान्य तरिकाले सानो चिजबाट काम सुरु गर्ने हो । यसो हुँदा लक्षित योजना पूरा गर्ने आधार तय हुन्छ । अबका दिनमा मैले यसरी नै काम गर्नेछु ।
देशले जलविद्युत उत्पादनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने यहाँको व्यक्तिगत तथा संस्थागत योजना के छ ?
६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी–३ अध्ययन गर्न आवेदन दिएको छु । टिबिआई होल्डिङ कम्पनीले आवेदन दिएको छ । हाम्रो आर्थिक तथा वित्तीय क्षमताले भ्याए एनआरएनबाटै अघि बढाइनेछ । एनआरएनले काम गरेको पनि देखिन्छ । र, राज्यका लागि ठूलो योगदान पुग्छ । हाम्रो क्षमताले भ्याएन भने विदेशी लगानी भित्र्याइन्छ । लगानीकर्ता पनि ‘पाइपलाइन’ मै छन् । एनआरएन र वैदेशिक संयुक्त लगानीमा पनि निर्माण गर्न सकिन्छ ।
तामाकोसी आयोजना नै किन रोज्नुभयो ?
यो निकै सम्भाव्य आयोजना लाग्यो । प्रसारण लाइनको पनि त्यति समस्या छैन । सडक पुगेको छ । पिपिए गर्न हामी तयार छौं, सक्छौं । पिपिए गर्नुअघि लगानी वा लागत सुनिश्चित हुनुपर्छ । त्यसको समस्या हुँदैन ।
जलविद्युतमा एनआरएनको लगानी कति पुग्यो । केही तथ्य छ ?
यति नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । यद्यपि, पछिल्लो समय यो क्षेत्रमा एनआरएनको लगानी बढ्दैछ । एनआरएनले लगानी गरेका साढे ५५ मेगावाटका ५ आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भइसकेको छ । १ सय ४२ मेगावाटका चार आयोजना निर्माणाधीन छन् । योसँगै स्वदेशी व्यवसायीसँग मिलेर लगानी गरेका आयोजना पनि छन् ।
साभार: उर्जा खबर